एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिक्री
नेपाल राष्ट्र बैंकले एक अर्ब ९९ करोड रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार जारी मिति यही असोज २३ गते तोकेर असोज १६ गते बिहीबार अपराह्न ३ बजेसम्ममा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई उक्त परिमाणमा ट्रेजरी बिल बिक्री गरिएको हो । बिक्री गरिएको कुुल ट्रेजरीमध्येमा ९१ दिने अवधिको १० करोड र एक सय ८२ दिने अवधिको एक अर्ब ८९ करोड ८६ लाख रुपैयाँबराबरको रहेको छ । सोमध्ये ९१ दिने अवधिको परिपक्व हुुने मिति वि.सं. २०७६ पुुस २२ गते र एक सय ८२ दिने अवधिको टे«जरीको परिपक्व हुुने अवधि वि.सं. २०७६ चैत २५ गते तोकिएको छ ।
यसअघि यही असोज १३ गते पनि राष्ट्र बैंकले तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो । सोमध्ये ९१ दिने अवधिको १० करोड र एक सय ८२ दिने अवधिको तीन अर्ब रुपैयाँको रहेको थियो । यसैबीच राष्ट्र बैंकले असोज १६ गते बिहीबार नै १५ अर्ब रुपैयाँको रिपो जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सात दिनमा परिपक्व हुुने गरी अल्पकालीन अवधिको रिपो जारी गरिएको हो । रिपो खरिदका लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले भाग लिएका थिए । राष्ट्र बैंकका अनुसार रिपोको परिपक्व हुुने अवधि सात दिन अर्थात् यही असोज २३ गते तोकिएको छ ।